हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओमा मागभन्दा ६.२१ गुणा बढी आवेदन
असार १७, काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओमा मागभन्दा ६.२१ गुणा बढी आवेदन परेको छ । सिडिएस क्लियरिङका अनुसार शुक्रवार १:४५ सम्ममा ९ लाख ८९ हजार ६३८ जना आवेदकले १ करोड १३ लाख ७७ हजार ३७० कित्ता...
विद्युत् प्राधिकरण र आईएसपीहरुको पोलभाडा विवादले इन्टरनेट सेवा बन्द हुनु हुँदैन: खनाल
असार १७, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरूको पोलभाडा विवादले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन नहुने भन्दै इन्टरनेट...
लघुवित्तमा लगानीको अवसर : २२ कम्पनीहरूको शेयर मूल्य हजारभन्दा कम
असार १७, काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र दोस्रो बजार घटिरहँदा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा पनि कमी आइरहेकाे छ । दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्य कायम हुँदै आएका लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बजार घ...
नाफा कमाउन पोल भाडा बढाइएको होइन, आईएसपीहरूलाई पूर्वाधार शेयरिङ गराउन हो : घिसिङ
असार १७, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफा कमाउन नभई इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरू पूर्वाधार शेयरिङ गराउनका लागि पोल भाडा बढाएको दाबी गरेका छन् ।...
abhiyandaily.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जेठमा सबै म्युचुअल फण्डहरूको न्याभ घट्यो
काठमाडौं । २९ म्युचुअल फण्डहरूले जेठ मसान्तसम्मको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार २९ ओटै फण्डहरूको प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) घटेको छ । जेठ मही...
इङ्वा हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासन गर्न सेबोनमा दियो निवेदन
असार १७, काठमाडौं । इङ्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि प्रतिकित्ता रू.१०० का ...
abhiyandaily.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
यस वर्ष मोबाइलको विक्री ७ दशमलव १ प्रतिशत घट्ने अनुमान
कनेक्टिकट (अमेरिका) । यस वर्ष विश्वभर मोबाइल फोनको विक्री घट्ने अनुमान गरिएको छ । बजार अनुसन्धान संस्था गार्टनरले बिहीवार सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रक्षेपणमा यस्तो बताएको हो । प्रक्षेपणअनुसार सन् २०...
कोलम्बो (श्रीलंका) । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र श्रीलंकाबीचको वित्तीय उद्धारसम्बन्धी वार्ता सम्झौताबिनै टुंगिएकाे छ । यसअघि कोषले वार्ता सकारात्मक र रचनात्मक भए...
नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतले सुन आयातमा लगाउँदै आएको कर बढाएको छ । पछिल्लो समय चालू खाता घाटा फराकिलो बन्दै गइरहेको र सुनको आयात महसुलमा भएको वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढेसँगै भारतले जुन ३० देखि ला...
abhiyandaily.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ङादी ग्रुप पावरको हकप्रद शेयर सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आइतवार
असार १७, काठमाडौं । ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको हकप्रद शेयर सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आइतवार अर्थात् असार १९ गते रहेको छ । कम्पनीले १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न असार २० गते बुक क्लोज गरेसँगै...
जीवन विकास लघुवित्तको ७० % बोनस शेयर सूचीकृत
असार १७, काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस शेयर शुक्रवार नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको ४२ लाख ५८ हजार ८ सय कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यो बोनस शेयर हितग्राही...
असार १७, काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालक पदमा गंगाप्रसाद ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारले बैंकको सञ्चालक समितिकाे रिक्त पदमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेकाे हाे । ज्ञवालीले बुधबार पद तथा गोपनीयता...
रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा संस्थापक शेयरधनीलाई थप लगानी रकम जम्मा गर्न अनुरोध
असार १७,काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले संस्थापक शेयरधनीहरूलाई शेयर वापतको थप रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले आगामी भदौ ६ गतेभित्र उक्त रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो । ...
असार १७, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतमा एक पटक मात्रै प्रयोग गरेर फ्याकिने प्लाष्टिकका सामानहरूको उत्पादन, विक्री वितरण र प्रयोगमा शुक्रवारदेखि रोक लगाइएको छ । विश्वभर प्लाष्टिकजन्य फोहोरको उत्पादन क...
abhiyandaily.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
असार १७, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा दोहोरो खर्चले उपभोक्ता मारमा परेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको इन्टरनेट स...
असार १७, काठमाडौं । नबिल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको असार १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रवारदेखि लागू हुने गरी प्रमुख कार्यकार...
काठमाडौंको असन बजारस्थित फुटपाथमा राखिएको फलफूल पसलबाट गुलाब जमुना किन्दै ग्राहक । अम्बाजस्तो देखिने यो फल प्रतिकिलो एक हजार रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको व्यापारी निराजन शाही बताउँछन् ।उनका अनुसार यो फ...
abhiyandaily.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मेलम्ची/हेलम्बुवासीमाबाढीको त्रास कायमै, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्निर्माण अलपत्र
काठमाडौं । गतवर्षको असार र साउनमा आएको बाढीले प्रभावित मेलम्ची/हेलम्बुवासीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यो वर्षको वर्षामा पनि उनीहरूमा उत्तिकै त्रास छ । सरकारले बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, जग...
abhiyandaily.com . १० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
असार १७, काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटलले समृद्धि फण्ड–१ का इकाइधनीहरूलाई हितग्राही खातामा बैंक खाता अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । क्यापिटलले शुक्रवार एक सूचना प्रकाशन गरी हितग्राही खातामा बैंक ख...
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा उत्साहजनक वृद्धि
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठ मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा व्यवसाय २९ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समितिबाट प्राप्त जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत साउनदेखि जेठसम्ममा २० निर्जी...
विराटनगर । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विराटनगर भन्सारबाट गहुँ आयात शून्यमा झरेको छ । गहुँको सट्टा मैदा र आटाको आयात शुरू भएको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि तयारी आटा र म...
समिट लघुवित्तको बोनस शेयरमा लाग्ने कर बापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह
असार १७, काठमाडौं । समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वितरण गरेको बोनस शेयरमा लाग्ने कर बापतको रकम जम्मा गर्न शेयर धनीलाई आग्रह गरेको छ । कम्पनीले २०७८ पुस २४ गते सम्पन्न साधारण सभाबाट पारित ग...
abhiyandaily.com . ११ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
समृद्धि फाइनान्सको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट
असार १७, काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले बोलपत्रद्वारा निष्कासन गरेको संस्थापक समूहतर्फको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै असार १५ गते उक्त ...
असार १७, काठमाडौं । प्रभू बैंक लिमिटेडको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर असार १७ गतेदेखि विक्रीमा आएको छ । बैंकले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुले उक्त शेयरमा आव...
abhiyandaily.com . १२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
समृद्धि फाइनान्सको १० हजार कित्ता संस्थापक शेयर विक्रीमा
असार १७, काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको १० हजार कित्ता संस्थापक शेयर असार १७ गतेदेखि विक्रीमा आएको छ । कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुले उक्त शेय...
abhiyandaily.com . १३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
हुलास फिन सर्भको वार्षिक साधारण सभा असार २६ गते
असार १७, काठमाडौं । हुलास फिन सर्भ लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा असार बोलाएको छ । कम्पनीको जेठ ३१ गते बसेको सञ्चालक बैंठकको निर्णय अनुसार सभा असार २६ गते बोलाएको हो । सभा कम्पनीको कर्पोरेट कार्या...
राप्ती हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न
असार १७, काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले निष्कासन गरेको आईपीओ असार १६ गते बिहीवार बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीले जेठ २४ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाह...
abhiyandaily.com . १४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
तथ्यांकोवाच : नेपालमा रू. १३ करोडको स्टेराइल आयात
काठमाडौं (अस) । चिकित्सा क्षेत्रमा अपरिहार्य वस्तुको रूपमा रहेको स्टेराइलको आयात नेपालमा तीव्रस्तरमा बढिरहेको छ । १० वर्षअघि लाखको हाराहारीमा रहेको स्टेराइलको आयात गत आर्थिक वर्षमा करीब १३ करोड रुप...
abhiyandaily.com . १५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नेपाल लोकस्टारको पावर्ड बाई स्पोन्सरमा जगदम्बा सुपर साइन
काठमाडौं (अस) । नेपालको मौलिक लोक संगीतमा आधारित रियालिटी शो ‘आइएमई नेपाल लोकस्टार’को दोस्रो संस्करणका लागि पावर्ड बाई स्पोन्सरमा जगदम्बा स्टील्स अन्तर्गत जगदम्बा सुपर साइन जस्तापाता अनुबन्ध भएको छ...
बलेवा । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले ओखर खेती प्रवर्द्धन थालेको छ । आर्थिक उपार्जन गर्ने मुख्य क्षेत्र कृषिलाई बनाएको उक्त गाउँपालिकाले ओखर खेतीको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै किसा...
७७ ओटै जिल्लामा ग्लोबल आइएमई बैंक
काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आइएमई बैंकका शाखा मुलुकका ७७ ओटै जिल्लामा पुगेका छन् । यसअघि डोल्पाबाहेक सबै जिल्लामा शाखा रहेको बैंकले डोल्पामा पनि शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका–३ ...
कुमारी जबद्वारा सञ्चालित‘प्रोफेसनल एचआर ट्रेनिङ’ सम्पन्न
काठमाडौं (अस) । कुमारी जबद्वारा सञ्चालित ‘प्रोफेसनल एचआर ट्रेनिङ’ सम्पन्न भएको छ । नेपालका विभिन्न संस्थाका अनुभवी र दक्ष व्यक्तिले तालीम दिएको कम्पनीले बताएको छ । ‘विभिन्न संघ–संस्थामा कार्यरत अ...
सिताराम घ्यू नयाँ प्याकमा सार्वजनिक
काठमाडौं (अस) । सीताराम गोकुल मिल्क्स कम्पनीले सीताराम घ्यू नयाँ प्याकमा सार्वजनिक गरेको छ । विगत २५ वर्षदेखि दूध तथा दूग्धजन्य वस्तुको कारोबार गर्दै आएको कम्पनीले नयाँ प्याकमा घ्यू सार्वजनिक गरेको...
महालक्ष्मीद्वारा विद्यालयको खानेपानीमा सहयोग
काठमाडौं (अस) । महालक्ष्मी विकास बैंकले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–६ नगरकोटको चेतना आधारभूत विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ । बैंकको भक्तपुर शाखाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित...
समृद्धि फाइनान्सले ल्यायो ५ वर्ष ७ महीनामा निक्षेप दोब्बर हुने योजना
काठमाडौं (अस) । समृद्धि फाइनान्सले ५ वर्ष ७ महीनामा निक्षेप दोब्बर हुने योजना सार्वजनिक गरेको छ । फाइनान्सले रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेप योजना अन्तर्गत सो योजना ल्याएको हो । त्यस्तै ९ वर्षमा तेब्ब...
खानेपानी समितिलाई लुम्बिनी विकास बैंकको सहयोग
काठमाडौं (अस) । लुम्बिनी विकास बैंकले भकुन्डेबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समितिलाई खानेपानी कार्यालय सञ्चालनका लागि एघार...
आइएमई जनरल र काठमाडौं प्याथ ल्याबबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र महाराजगञ्जस्थित काठमाडौं प्याथ ल्याब एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबीच छूट सुविधासम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख...
काठमाडौंमा ‘स्टडी इन इन्डिया एक्स्पो’ शुरू
काठमाडौं (अस) । भारतका ४० भन्दा बढी विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको ‘स्टडी इन इन्डिया एक्स्पो’ काठमाडौंमा शुरू भएको छ । अफेयर्स नेपालको आयोजनामा बृहत् शैक्षिक मेला बिहीवारदेखि शुरू गरिएको हो । आयोज...
सडकको पहिरो पन्छाउन २१८ उपकरण तयारी अवस्थामा
काठमाडौं (अस) । वर्षायाममा बाढीपहिरोका राजमार्ग र सडकमा आउने अवरोध हटाउन सडक विभागले देशभर २१८ थान उपकरण परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार हाल ९३ उपकरण विभिन्न साइटमा परिचालन गरिएको छ...
ratopati.com . ४८ मिनेट अघि